ဇင်​ဘာ​ဘွေ​တွင်​ ​အ​မျိုး​သား​များ​အား​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အုပ်​စု​ဖွဲ့​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​မှု​​ဖြစ်​ပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ​ဇင်​ဘာ​ဘွေ​တွင်​ ​အ​မျိုး​သား​များ​အား​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အုပ်​စု​ဖွဲ့​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​မှု​​ဖြစ်​ပွား
​ဇင်​ဘာ​ဘွေ​တွင်​ ​အ​မျိုး​သား​များ​အား​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အုပ်​စု​ဖွဲ့​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​မှု​​ဖြစ်​ပွား
Posted by smytu1996 on Oct 22, 2010 in News, Opinions & Discussion, World News | 19 comments
ရဲ​အ​ရာ​ရှိ​ ​မ​စ္စ​ Augustine Chihuri က​ ​ဇင်​ဘာ​ဘွေ​၏​ ဥ​ပ​ဒေ​ တ​ချို့​အား​ရှင်း​​ပြ​စဉ်​
ဇင်​ဘာ​ဘွေ​နိုင်ငံ​တွင်​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အ​မျိုး​သား​များ​ကို​ အုပ်​စု​ဖွဲ့​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​သည့်​ ​ကိ​စ္စ​များ​ကြောင့်​ ​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​မှာ​ ​ခေါင်း​ခြောက်​နေ​ကြောင်း​ ​သိ​ရ​သည်​။​ ​လွန်​ခဲ့​သော​ ​၁၁​ ​လ​အ​တွင်း​ ​အ​မျိုး​သား​ ​၆​ ဦး​မှာ​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အုပ်​စု​လိုက်​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​မှု​ ​ခံ​ခဲ့​ရ​သည်​။
ရဲ​ဌာ​န​က​ ​ထို​ကိ​စ္စ​အ​တွက်​ ​ရှက်​ပြီး​ ​ရဲ​မ​တိုင်​သော​ ​အ​မျိုး​သား​များ​လည်း​ ​ရှိ​နိုင်​ကြောင်း​ ​သုံး​သပ်​ပြော​ကြား​ခဲ့​သည်​။​ ​အ​သက်​ ​၂၆​ ​နှစ်​ရှိ​ ​ရဲ​သား​တစ်ဦး​သည်​ ​ဘူ​လာ​ဝါ​ယို​တွင်​ ​တာ​ဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​စဉ်​ ​အ​သေး​စား​ ​မီ​နီ​ဘတ်စ်​တစ်​စင်း​က​ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​သ​ဖြင့်​ ​သွား​ရောက်​ခဲ့​ရာ​ ​ကား​ထဲ​ရှိ​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​ ​၃​ ဦး​က​ ၎င်း​အား​ ​ဝိုင်း​ချုပ်​ခဲ့​ကြ​သည်​။​ ​ယင်း​သည်​ ​ရုန်း​ကန်​ရန်​ ​ကြိုး​စား​သော်​လည်း​ ​မျက်​နှာ​ကို​ ​မေ့​ဆေး​ဖြင့်​ ​အုပ်​ခံ​ရ​ပြီး​နောက်​ သ​တိ​လစ်​သွား​ကြောင်း​ ​ရဲ​တပ်​ဖွဲ့​ ​အ​ကြီး​အ​ကဲ​ ဩ​ဂက်​စ​တင်း​ချီ​ဟွာ​က​ဆို​သည်​။​ ​ထို့​နောက်​ ​ထို​ရဲ​သား​ ​သ​တိ​ပြန်​ရ​လာ​ချိန်​တွင်​ ၎င်း​သည်​ ​မြို့​ပြင်​တော​အုပ်​ထဲ​ ​ရောက်​နေ​ပြီး​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​ ​၃​ ဦး​က​ ​ယင်း​ကို​ ​လိင်​ဆိုင်​ရာ​ ​စော်​ကား​ပြု​မူ​နေ​သည်​ကို​ ​သ​တိ​ပြု​မိ​ခဲ့​သည်​။​ ​ထို့​နောက်​ ​စိတ်​ကျေ​နပ်​သွား​သော​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​သည်​ ​ရဲ​သား​တွင်​ ​ပါ​လာ​သော​ ​ငွေ​ကြေး​အ​နည်းငယ်​နှင့်​ ​မို​ဘိုင်း​ဖုန်း​တို့​ကို​ ​ရ​ယူ​ကာ​ ၎င်း​အား​ ​မြို့​ပြင်​တွင်​ ​ထား​ခဲ့​ပြီး​ ​ထွက်​ပြေး​သွား​ကြောင်း​ ​ချီ​ဟွာ​က​ ​ပြော​ကြား​ခဲ့​သည်​။​ ​ထို​သို့​သော​ ​လုပ်​ဆောင်​ချက်​နှင့်​ ​ပ​တ်​သက်​ပြီး​ ​အ​ကြောင်း​ရင်း​ကို​ ​မ​သိ​ရ​ဟု​ ​ချီ​ဟွာ​က​ဆို​သည်​။
ဇင်​ဘာ​ဘွေ​ ဥ​ပ​ဒေ​အ​ရ​ ​မု​ဒိမ်း​မှု​သည်​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​ ​ပြု​ကျင့်​ခံ​ရ​မှ​သာ​ ​အ​ကျုံး​ဝင်​ပြီး​ ​အ​မျိုး​သား​များ​အ​တွက်​ ​သတ်​မှတ်​မ​ထား​ချေ​။​ ပြီး​ခဲ့​သည့်​လ​က​လည်း​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​ ​နှစ်ဦး​သည်​ ​အ​သက်​ ​၄၄​ ​နှစ်​အ​ရွယ်​ ​အ​မျိုး​သား​ ​တစ်ဦး​အား​ ၎င်း​တို့​နှင့်​ ​လိင်​ဆက်​ဆံ​ရန်​ ​အ​တင်း​ခိုင်း​စေ​ခဲ့​သည်​။​ ​ထို​စ​ဉ်​က​ ​ယင်း​အ​မျိုး​သား​သည်​ ​အိပ်​ယာ​တစ်​ခု​ကို​ ​ဝယ်​လာ​ပြီး​ ​ကာ​ရိုး​အ​နောက်​ပိုင်း​ရှိ​ ​နေ​အိမ်​သို့​ ​သယ်​သွား​ချိန်​တွင်​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​ယ​ခု​လို​ ​ခိုင်း​စေ​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်​။
မသိလို့ တစ်ခုမေးမယ်နော် (ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်) ယောက်ျားလေးတွေ မေ့နေတုန်းမှာ မိန်းကလေးတွေဘက်က အတင်း မုဒိမ်းကျင့်လို့ တကယ်ရော ရရဲ့လား?
ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ လက်တွေ့ကျကျပြောရရင် အိပ်နေရင်းနဲ့တောင်မှ ဟိုကောင်က ငေါက်တောက် ငေါက်တောက် ဖြစ်နေတာ။ မေ့နေရင်လည်း ရလောက်မှာပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်က..ရဟန်းတပါး..အိပ်ပျော်နေတုံး..မာတုဂါမတယောက်က သူ့အပေါ်တက်ပြီး ကာမဆက်ဆံပါတယ်..။
အဲဒါ..ရဟန်းက ဘု၇ားရှင်ကို.. ၀ိနည်းကျိုးပေါက်ပြီးအပြစ်ဖြစ်တယ်ထင်ပြီး..မေးလျှောက်တော့.. ဘုရားက..“အဲဒီအပေါ် သာယာသလား”လို့ပြန်မေးတယ်လို့ စာထဲဖတ်ဖူးပါတယ်..။
ထပ်ဖြည့်ပြောရရင်.. ယူအက်စ်မှာလည်း..ကျောင်းဆ၇ာမက..တပည့်ယောက်ျားလေးကိုဆွဲဆောင် ကာမရယူတာမျိုးခဏခဏဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒါမျိုးဆို ဆ၇ာမကို ဥပဒေအရအရေးယူပါတယ်.။အခုတင်သတင်းတခုတွေ့လို တင်ပေးလိုက်တယ်..။ မြန်မာပြည်မှာလည်း…ရှိနိုင်ပါတယ်..။ ကလေးတွေက မပြောလို့သာ..သတင်းတွေမတက်လာတာနေပါမယ်..။
TAMPA – Since the arrest of Debra Lafave in 2004 for having sex with her 14-year-old student, there have been several more arrests of Tampa area teachers accused of the same behavior. The highest number was in 2008, when at least eight teachers were accused of having inappropriate, sexual relationships with students, which begs the question, “What is going on, and is this an epidemic?”
intro ရေ ……. သေချာပေါက်ကိုရပါတယ် ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူအတွက်ဆို ရပါတယ်
online ကနေ ကောင်မလေးတွေက ချိန်းရင် တစ်ယောက်ထဲ မသွားနဲ့နော်။
မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေကို မုဒိန်းမကျင့်နိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးကိုသော်လည်း၊ အမျိုးသားက အမျိုးသားကိုသော်လည်းကောင်း မုဒိန်းကျင့်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အမျိုးသားတွေကို မုဒိန်းကျင့်တယ်ပြောတာထက် Sexual Harassment လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာပြုတာတွေသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ rape လား၊ sexual harassment လားဆိုတာခွဲခြားပြန်ဆိုသင့်ပါတယ်။
သားသားေ ကြာက်ကြောက် … တော်ပီ ညဘက် တယောက်ထဲ အပြင် မထွက်ရဲ တော့ ဝူး….
မြန်မာပြည်က ရေနံချောင်းကောလိပ်အမျိုးသမီးဆောင်က ကြားရင် ဒါလေးများ..လို့ ပြောဆိုပြီး ရယ်နေကြပါအုံးမယ်ဗျာ..။
ဟုတ်လား၊ လုပ်စမ်းပါဦးဗျ…. ကျွန်တော်မသိသေးဘူး၊ ဘာများဖြစ်သွားလို့လဲ
မသိသေးရင် ဒီမှာ ရှာကြည့် ရှိတယ် အသေအချာကို တိတိကျကျ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း သတင်းရေးထားတာရှိတယ်.. လူအကြည့်အများဆုံး ပိုစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
thanks for all, just at least funny post, i m pleased to all.
thanks n also KAI>>
အော် ဒါမျိုးတွေလဲ ရှိတာကိုး
မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ယောက်ကျားလေးကို မေ့အောင်လုပ်ဖို့ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ပဲလိုတယ်ဆိုတာကော … ပြီးတော့ မေ့ဆေးသုံးထား၇င် ယောက်ကျားလေးတွေက လိင်ကိစ္စမှာ ချို့ ရွင်းသွားမှာပါ..ဘယ်လိုမှ ဆက်ဆံလို့မ၇ပါဖူး….ပြီးတော့ သူက ရှက်လို့မတိုင်ဖူးတဲ့.အဲဒါလည်း သဘာဝမကျပါဖူး…ဥပဒေမှာ ပြထန်းမထားဖူးဆိုတာက မိန်းကလေးက rape လုပ်လို့ကို မ၇လို့ပါ …ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဥပဒေမှာ ပြတန်းထားတာက ယောက်ကျားလေးအတွတ်ပြောတာနော် မိန်းကလေးက rape လုပ်နေတုန်း စိတ်ပါခဲ့၇င် rape မမြောက်ဖူးလို့ပါပါတယ်..အဲဒါကြောင့် ယောက်ကျားလေးက စိတ်မပါမှတော့ rape ကို မဖြစ်နိုင်တော့ပါဖူး…..အဲဒါကြောင့် အပေါ်က ၁ယောက်ပြောသလိုပဲ sexual harassment လို့ ပြောတာက ပိုပြီး သဘာဝကျပါလိမ့်မယ် (ဟိဟိ..)